एजेन्सी । अमेरिकाको बिमान निर्माता कम्पनी बोइङले कोरोनाभाइरसको महामारीका पछि जारी लकडाउनका कारण वासिङ्टन राज्यमा रहेको आफ्नो कारखाना अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विस्तृतमा
जुम एप नयाँ भर्सनमा
यसरी जोडिदैँछ एउटा व्यक्तिको शरिरमा अर्को व्यक्तिको टाउको !
एजेन्सी । हामीले पुराणमा भगवान गणेशको शरिरमा हात्तिको टाउको जोडिएको कथा त सुनेका छौं । यो अवधारणालाई वास्तविक दुनिँयामा साकार गर्नको लागि इटालीका एक वैज्ञानिकले काम गरिरहेका छन् ।
एजेन्सी । साथीहरुलाई अनावश्यक तस्विर वा पोष्टमा ट्याग नगर्नुस् । ट्याग गरेको सबैलाई मन पर्दैन । यसले तपाइँलाई लाइक बढाउने भन्दा पनि घटाउने खतरा हुन्छ
लन्डन । बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनले वार्षिक नोक्सानी करिब ७ अर्ब ६० करोड युरो पुगेको मङ्गलबार जनाएको छ ।
ट्वीटरले १ लाख ६६ हजार खाता बन्द गर्‍यो, अन्य देशसँग पनि सहकार्य गर्दै
एजेन्सी । सामाजिक संजाल ट्वीटरले १ लाख ६६ हजार ५१३ अकाउन्ट निलम्वन गरेको छ । आतंकवाद्, यौन दुव्र्यवहार तथा सामाजिक कृयाकलापमा खलल पुर्याउने खालका ती अकाउन्टहरुलाई गत वर्षको जुलाई देखि डिसेम्बरमा निलम्वन गरेको हो । ट्वीटरको लिगल पोलिसी एण्ड ट्रष्ट लिड प्रमुख विजय घाडाले बताएअनुसार शंकास्पद खाता निलम्वन पछि १९ प्रतिशतले अप्रिय घटनाहरुमा कमी आएको बताएका छन् ।
कसरी गर्छ मानव निर्मित किड्नीले काम
एजेन्सी । विज्ञानले पछिल्लो समय निकै ठुलो विकास गरिसकेको छ । दिनहुँ नयाँ कुराहरु बाहिर आइनै रहेका छन् । नयाँनयाँ अनुसन्धानका कारण मानिसहरु विभिन्न विकल्पबारे
डिजिटल प्रदेश बनाउने कार्यको शुरुवात आगामी आर्थिक वर्षदेखिः मुख्यमन्त्री राई
विरानगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बनाउनका लागि आइटी पार्क निर्माण गर्ने बताएका छन् । आइसिटी मिडियाद्वारा शुक्रबार आयोजित स्टार्टअप एण्ड इनोभिएशन दुई दिने मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले सूचनाको प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र रोजगारी क्षेत्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गर्ने जानकारी दिए ।
मोबाइलमा अश्लिल भिडियो हेर्दै नहेर्नुहोस्
एजेन्सी । आजभोलि १३ वर्षदेखि नै किशोर किशोरीले नियमित रुपमा अश्लिल भिडियो र तस्बिर हेर्ने कुलतमा फसेको पाइन्छ ।
पुरुषका लागि अजबगजबको कन्ट्रासेप्टिभ
एजेन्सी । अनावश्यक गर्भबाट बच्न आजकल दम्पत्तिहरु हरेक उपायहरु अपनाउछन् । टेक्नोलोजीको जमानामा आजकल धेरै अनावश्यक गर्भ रोक्न धेरै उपकरणहरुको विकास भइसकेको छ ।
काठमाडौँ । तपाइ भारत वा चीन जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नै मोबाइल र सिम लिएर जानुहोला । चीन र भारत जहाँ गएपनि तपाइले नेपालमा प्रयोग गरिरहेको मोबाइलाटै फोन गर्नुसक्नुहुनेछ । फोन गर्न मात्रै हैन एसएमएस समेत पठाउन सक्ने भएका हुन् । त्यस्तै, चीन र भारतकै नम्बरमा समेत फोन कल गर्न सक्नेछन् । आजबाट शुरु हुने प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालन आउने भएपछि यो सुविधा पाइने भएको नेपाल टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।